နေးဗစ် LLC ကမ်းလွန်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
မည်သို့နှင့်အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးနေးဗစ် LLC ဖွဲ့စည်းရန်
သင်တစ်ဦးကမ်းလွန်ကန့်သတ်ထားတာဝန်ယူမှုကိုကုမ္ပဏီ (LLC) စဉ်းစားနေပါသလား? ဒါဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်တစ်ဦးဖွဲ့စည်းစဉ်းစားရန်ပညာရှိဖြစ်လိမ့်မယ် နေးဗစ် LLC။ အောက်တွင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းအများအပြားရှိပါတယ်။
တစ်ဦးက Nevis LLC ၏အကျိုးကျေးဇူးများ:
LLC အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးပုဂ္ဂိုလ်ရေးတရားစွဲဆိုမှုမှာသူတို့ရဲ့ LLC ပိုင်ဆိုင်မှုဆုံးရှုံးမှကာကွယ်နေကြပါတယ်
တစ်ဦးကတစ်ဦး-လူတစ်ဦး LLC အလို့ငှာကာကွယ်မှုအားသွင်းအားလက်ခံတွေ့ဆုံ
အစာရှောင်ခြင်းဖွဲ့စည်းရေး - 24 နာရီဖွဲ့စည်းနိုင်ပါသည်
နေးဗစ် LLC မန်နေဂျာနှင့်အဖွဲ့ဝင်များကအများပြည်သူမှတ်တမ်းများစာရင်းတွင်မပါဝင်ပေ
မဆိုတစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်တရားဝင် entity (အခြား LLCs, ကော်ပိုရေးရှင်း, ကိုး စား. , etc တို့ပါဝင်သည်) အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့်မန်နေဂျာဖြစ်လာပေမည်
တစ်ဦးကနေးဗစ် LLC သည်နေးဗစ်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ Ordinance 1995 အောက်မှာနေသူများကဖန်တီး။ အဆိုပါဥပဒေများကိုအလွန်ကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲဝဲ LLC အထုံးအဖွဲ့တို့ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှု features တွေပင်နောက်ထပ်တစ် 2015 ပြင်ဆင်ရေးအတွက်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
Nevis LLC က NAME
အဆိုပါနေးဗစ် LLC သည်စကားလုံးများကို "လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ" သို့မဟုတ်ယင်း၏အတိုကောက်၏တဦးတည်း, "LLC", "LC", "LLC" သို့မဟုတ် "LC" ဆံ့ရန်လိုအပ်ပါသည်။ "LLC" အသုံးအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ယခင်က LLC အမည်များတင်သွင်းအမည်များကနေအလွယ်တကူပုံမှန်ဖြစ်ရပါမည်။
အထူးလိုင်စင်သို့မဟုတ်အခြားအစိုးရခွင့်ပြုချက်စကားတို့ကိုအာမခံချက်, ဘဏ်, အဆောက်အအုံလူ့အဖွဲ့အစည်း, အကျိုးဆောင်, ငွေ, ကုန်သည်ကြီးများ, Chartered ဘဏ်, သမဝါယမ, ခရက်ဒစ်ယူနီယံ, ဖောင်ဒေးရှင်းရံပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှု, ရွှေစင်, Imperial, လျော်ကြေး, အာမခံ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသုံးစွဲဖို့လိုအပ် ရန်ပုံငွေအဖွဲ့, ချေးငွေထုတ်ပေးရန်, ငွေ, အပေါင်ခံ, စည်ပင်သာယာ, တက္ကသိုလ်, တော်ဝင်, ချွေတာသုံးစွဲခြင်းနှင့်ချေးငွေ, စတော့အိတ်, ဒါမှမဟုတ် Underwriters ။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးနီးပါးတရားစီရင်မှုနှင့်အတူအမျှတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်ရုံးခန်းလိပ်စာနေးဗစ်အတွက်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်, တွင်တည်ရှိသည်နှင့်နေးဗစ်အားဖြင့်လိုင်စင်ရထားပြီးကြောင်းဒေသခံတစ်ဦးအေးဂျင့်လိုအပ်ပါသည်။
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနာရီအတွင်းဖြေကြားမယ့်နေးဗစ်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်နှင့်အတူမေးလ်လက်ခံရရှိခြင်းနှင့်ရှေ့ဆက်ဖို့နေးဗစ်ရုံးလိပ်စာအပါအဝင်တစ်ဦး optional ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်။
နေးဗစ်အတွက်ဖွဲ့စည်းခဲ့တစ်ဦးကကုမ္ပဏီတခြားနေရာပိုင်ဆိုင်လည်ပတ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည့်အမေရိကန်, ကနေဒါ, ဗြိတိန်ကဲ့သို့အခြားနိုင်ငံတွေအတွက်သြစတြေးလျနှင့်နိုင်ပါတယ်။
တစ်နာဗိစ် LLC များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွဲ့စည်းရေးအခကြေးငွေပထမနှစ်တွင်မှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်လိပ်စာပါဝင်သည်။
Nevis LLC ဝ
အနည်းဆုံးတဦးတည်း LLC အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလိုအပ်ပါသည်။
တစ်နာဗိစ် LLC ရှိနိုင်ပါသည်အဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်ကန့်သတ်မရှိ။
Nevis LLC စီမံခန့်ခွဲမှု
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စီမံခန့်ခွဲမှု - တစ်ဦးကမန်နေဂျာအားဖြင့်သို့မဟုတ်ယင်း၏အဖွဲ့ဝင်ကစီမံခန့်ခွဲကုမ္ပဏီရှိသည်ဖို့ရွေးချယ်နိုင်သည်။ တစ်ဦးကတစ်ဦး-လူတစ်ဦးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့်မန်နေဂျာခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်ခုမှာမန်နေဂျာဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး (ပိုင်ရှင်) ဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။
တစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများနေးဗစ် LLC ၏မန်နေဂျာများရှိနိုင်ပါသည်။
Nevis IN အခွန်
တစ်ဦးကနေးဗစ် LLC ဒေသခံအခွန်ပေးဆောင်ခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ဝင်ငွေအခွန်, မြို့တော်အမြတ်အခွန်နှင့်အခြားအခွန်အခများပါဝင်သည်။ (တစ်ဦးကသူသို့မဟုတ်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်မှာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏အခွန် codes တွေကိုလိုက်နာရမည်။ )
နေးဗစ် LLC နှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးကြေးအတော်လေးကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်နှစ်စဉ်အစိုးရနှင့်မှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်ဝန်ဆောင်ခကိုဖုံးလွှမ်း။
Nevis PUBLIC မှတ်တမ်းများ
ဥပဒေများ anonymity ကိုမျက်နှာသာ။ တစ်နာဗိစ်ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ရှင်၏အမည်များ, အဖွဲ့ဝင်များ, မန်နေဂျာများ, အရာရှိများ, ဒါရိုက်တာများအများပြည်သူမှတ်တမ်းများအတွက်တင်သွင်းကြသည်မဟုတ်။
အဖွဲ့ LLC သည်ဆောင်းပါးများပုနေးဗစ်မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူတင်သွင်းကြောင်းစာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဆောင်းပါးများကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ရှင်များ, အဖွဲ့ဝင်များ, နွားစားခွက်, အရာရှိများသို့မဟုတ်ဒါရိုက်တာများစာရင်းပြုစုရန်မလိုအပ်ပါ။ ဒါဟာကုမ္ပဏီကုမ္ပဏီအမည်နှင့်မှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်များ၏အမည်နှင့်လိပ်စာဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်သော verbiage ပါရှိသည်။
အများဆုံးကာကွယ်မှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ privacy ကိုတစ်ဦးအပိုဆောင်းရှေ့နေအဖြစ်အမည်စာရင်းတင်သွင်းန်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်။
သုံးလတစ်ကြိမ်နှင့် / သို့မဟုတ်နှစ်ပတ်လည်စာရင်းကိုင်များ၏တင်ပြချက်မလိုအပ်သောအခြားတရားစီရင်မှုနှင့်မတူဘဲတစ်နေးဗစ် LLC အဘို့အဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သောလိုအပ်ချက်များကိုရှိပါတယ်။ အဆိုပါစာရင်းကိုင်နှင့်မှတ်တမ်းများအဖွဲ့ဝင်များနှင့်မန်နေဂျာ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ဖြစ်ကြပြီးနေးဗစ်အတွက်မဆိုလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်အေဂျင်စီသတင်းပို့ခံရဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖိုင်တွေနေးဗစ်ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီများမှ တူညီတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေ့က နှောင်းပိုင်းတွင်သောနေ့၌အမိန့်ထုတ်လျှင်အမိန့်လာမယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေ့ကအများဆုံးကိစ္စများတွင်, နေရာချခြင်းသို့မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။
Virtual ရုံးနဲ့ PROGRAM
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီကကမ်းလှမ်း နေးဗစ်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် အောက်ပါတို့အပါအဝင်:
တစ်ဦးကဘဏ်နှင့် / သို့မဟုတ်အရစ်ကျအကောင့်
မေးလ် forwarding ကိုအတူတစ်ဦးကနေးဗစ်လိပ်စာ
ဆန်ခါတင်မန်နေဂျာ / အရာရှိများ / ဒါရိုက်တာများ
တစ်နာဗိစ် LLC ဖွဲ့စည်းရန်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရေအတွက်ကမခေါ်, အွန်လိုင်းမိန့်နေရာသို့မဟုတ်ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်အဆက်အသွယ်တစ်ဦးပုံစံကိုဖြည့်စွက်ရန်။